Geeska Africa: Dabin dhigid, ka tilaabsi iyo u dhigida siyaaseed.
Waxaan qorneyn xilligii ay bilaabatay siyaasadaha maldahan ee ka jitra geeska Afrika oo jiilba midkii ka horeeyay ka dhaxlo. Qormadaan kuma soo koobikarno taariikhdii Geeska Afrika, faragalinta shisheeye ee xad-dhaafka ah iyo waxyaalihii ay soo mareen shacuubta, waxaase kala qabsaneynaa meesha ay maalmahaan ka butirineyso:
- Shirkii Nairobi ee IGAD ugu yeertay madaxda sare iyo wakiilada TFG-da.
- Shirkii addis Ababa ee IGAD bishaan.Wasirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya baa u sheegay wasiiradii ka soo qeybgalay kulankii “in aan ciidamada Itoobiyaanka aysan diyaar u aheyn inay naftooda u huraan hawl aan dhamaad laheyn”. Gunnaanadkii shirkaas waxay wasiiradu ka soo saareen go’aanno ka dhan ah madaxda sare ee TFG-da “ kuwii caqabad ku noqda dadaallada xalka loogu raadinayo Soomaaliya” inkastoo aan go`aanka lagu sheegay magacyo, waxaanse qarsooneyn in loo la jeeday madaxweynha TFG-da. Shirkaas waxaa ka dhashay su`aalo aan yareyn:
- Ururka IGAD ma leeyahay xeer hoosaad dhanka anshaxa ah, maadaama go`aankii Wasiirada arrimaha dibbada saxaafada loogu soo gudbiyay qaab murduxan.
- Waxaan caddeyn muwqifka wakiilka shirkaas uga qeyb galay dawlada Soomaaliya?
- Maxay tahay, inteesa le`egtahay awooda IGAD ugu hanjabayaan Madaxda TFG-da?
Dhinac kale, Madaxweynaha soomaaliya wareysi uu siiyay laanta Afsoomaaliga ee VOA baa lagu waydiiyay “ Itoobiya waxay sheegtay inay ciidamadooda la baxayaan Soomaaliya” wuxuu ku jawaabay” ciidamada Itoobiya waxay Soomaaliya ku yimaadeen heshiis, hase yeeshee xor bay u yihiin haddii ay sidaas dan guud u arkeen”. Intaas wuxuu ku sii daray, nabadgalyada dawladaha ku yaal geeska Africa way isku xiran yihiin, waxaanna loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo. Jawaabtaan cad baa abaarysa warkii ka soo yeeray dawlada Itoobiya“ in aysan diyaar u aheyn inay ciidamadeedu naftooda u huraan difaaca aan dhamaadka laheyn ee TFG-da”.
Daruuraha siyaasadeed ee ka curtay Geeska baa waxaa caaradka uga jira waxyaalaha uu soo kordhin doono safarkii Madaxweynaha ee dalalka Liibiya iyo Sudan:
- warar ka imaanaya dalka Libya ayaa sheegay in madaxweynaha TFG-du uu ka codsaday dhigiisa inuu dib-u-heshisinta Soomaalida uu qeybweyn ka qaato.
-Wasiirka koowaad ee TFG-da baa isna sheegay ineyn habbooneyn in shirkii la filayay inuu ka furmo 23/11/`08 dalka Jabuuti loo weecinaayo Liibiya. Waxuuna ku tilmaamay inay tahay mid lagu fashilinayo.Dhageyso VOA 20/11/`08. Hase yeeshee Madaxweyne Cabdullahi yusuf baa BBC-da laanta afsoomaaliga ka sheegay” inuusan ka soo horjeedin shirka Jabouti ka furmaya 23/11/`08, diyaarna u yahay inuu tago” .
- In aan siyaasadu laheyn saaxiib joogta ah, hase yeeshee ay leedahay dan joogta ah. Dad xog oggal ah baa xaqiijinaaya in saaxiibo kala tageen iyo kuwo wada xaajood u socdaan. Waxaan la yaab laheyn haddii ay soo shaacbaxaan waraka sheegaaya in casuumado loo kala diray madax ka mid ah mucaaradka ka soo horjeeda TFG-da si ay uga soo qeybgalaan dib-u-heshiisiinta Soomaalida.
- Waxaa la saadaalinayaa in safarkaani uu hakad galiyo xawaaraihii ay ku socdeen hawlaha IGAD ee dhexdhexaadin TFG-da. IGAD waxaa la Asaasay 1986, waxaana 22/04/`07 si ku meelgaar ah u joojiyay ka mid ahaantii ururkaas dalka Eretria. Wasiirka warfaafinta ee dalkaas Cali Abdu baa u sheegay wakaalada Ruters “ in ayn ku sii jirikarin ururrrkaas go`aamadiisu yihiin kuwo sharci darro ah, lana aqbalikarin”. Haddii saluugid iyo dhaliilo cusub ku yimaadaan nidaamka ururka IGAD waxaa su`aal galaya xubin ka ahaanta iyo waliba jiritaanka ururka .
Indhaha aduunka waxaa lagu soo jiitay dhacdooyinka Soomaaliya xilligaan ka taagan:
- Xooggaga Al-shabaab oo gacanta ku dhigay badiba koonturta Soomaaliya
- Burcad baddeeda oo qafaashay gaadiid far badan, sida markabka shidaalka ceeriin sida ee laga leeyhay dala Sucuudiga iyo kii ka horreeyay ee hubka siday. Falalkaan burcadnimada ah haddii ay sii socoto waxaa dhacaya in shirkada gaadiidka badahu inay ka leexdaan Suez kanaal oo ah marinka ugu habboon, ugana dhow dhinaca badda ee isku xira Yurub iyo Eeshiya, iyada oo aan laga wareegin koonfurta Afrika (cape of good hope). Kharaska kaliya ma ahee wadada wareega ahi, baa ah mid dhibaato leh.
- Isqab qabsida madaxda dawlada Soomaaliyeed oo sahlay in go`aamadaan ujeedo badanta ah in la qaato.
Sidoo kale, waxaa jira arrimo aan warbaahinta lagu sheegin laakiin gadaal ka riixaya go`aamadii dhawan ay soo kala saareen iwm:
- Go`aankii IGAD 18/11/`08. Itoobiya oo la wareegtay madaxnimada IGAD; oo ka soo horjeeda inaan lagu hungoobin hawlgalka ciidamadeedu ku joogaan Soomaaliya
- Go`aankii golaha Ammaanka ee UN-ka 21/11/`08. Go`aankaan waxaa soo jeediyay Danjiraha dalka Ingiriiska u fadhiya UN-ka. Shidaalka ka dhoofaya Gacanka carabta una socda Yurub iyo waqooyiga Ameerika waxuu mara marinka burcadu degtay. Waxaa kale oo jira shirkado badan oo reer galbeed ee dhinacyada shidaalka iyo adeegyada ceymiska oo hanti badani uga dhumayaan haddii ay sii socdaan afduubka iyo burcad badeedu iyo shaqaalaha saaran markabka Sacuudiga ee Siruis star.
- Shirkii jaamicada carabta 21/11/`08. Dhaqaalaha dawlada masr ka soo gala marin biyoodka Suez Kanaal ayaa waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay dakhaliga ugu badan ee ka soo baxa ilaheeda dhaqaale dalkaas. Waxaa ka shaqeeya shaqaale aad u badan.
- Go`aamadaan oo ka gaabsaday ka Kaluumeysiga sharciga darada iyo dhibaatooyinka ka imaankarta sun lagu shubo badda Soomaaliya.
- Ujeedooyinka dhabta ah ee ka danbeysa maraakiibta dagaalka ee ku soo qolqolaya xeebaha dalka Soomaaliya. Hase yeeshee burcad badeedu hortooda maraakiibta ku afduubanayaan ama maraakiibta ku heystaan. Dawladaan maraakiibta leh baan isku dan aheyn, dhinaca wax u wada wadain.
Markii la isku soo duubo, siyaasada Geeska Afrika ee siriqda ku jirta baa laga yaabaa:
- Inay rafasho ku galaafato dan-wadaag badan iyo shacuub aan danbiga geysan. Dalalka ku bahoobay ururka IGAD baa waxaa heysta khilaafaad dhexdood ah, khilaafaad ka sii hoosee ee dalka gudihiisa ah, iyaga oo aan laheyn dhaqaale ay ku meel mariyaan aragtidooda iyo go`aamada talo wadaa iyo la kaashi dibada ma ahee.
- In Go`aamada isdabajooga ah ee xilligaan loo akhriyayo kuwo xal loogu raadinaayo Soomaalida, baa khatar weyn ku noqonaya madaxbannaanida dadka iyo dalkaba.